တစ်နေ့နည်းနည်းအင်္ဂလိပ်စာ(၇) - Myanmar Network
Posted by zar ni (My Way!) on March 31, 2011 at 11:53 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
မကြာခဏများများရယ်မောနိုင်ဖို့၊ လူတော်တွေရဲ့လေးစားမှုနဲ့ကလေးတွေရဲ့ချစ်ခင်မှုရဖို့၊ သမာသမတ်ရှိတဲ့ဝေဖန်ရေး ဆရာတွေရဲ့နှစ်သက်မှုရဖို့နဲ့အယောင်ဆောင်သူငယ်ချ င်းတွေ ရဲ့သစ္စာဖောက်မှုဒဏ်ကိုကြံ့ကြံ့ခံနိုင်ဖို့၊
အလှအပတရားကိုခံစားနိုင်စေဖို့၊ သူတပါးရဲ့အကောင်းဆုံးကိုမြင်နိုင်ဖို့၊ လောကကြီးကို နည်းနည်းလေး ပိုကောင်းအောင်ချန်ထားခဲ့နိုင်ဖို့ ---ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ကလေးတစ်ဦးဖြစ်ဖြစ်၊ ဥယျာဉ်ကလေးတစ်ခုခုဖြစ်ဖြစ်၊ လူမှုရေးတစ်ခုခုရင်ကြားစေ့လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့---၊ ကိုယ်နေထိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် တပါးသူတစ်ဦးဦးပိုပြီးအဆင်ပြေအသက် ရှူချောင် ခဲ့တယ်ဆိုတာလေးသိရရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ဒါမှအောင်မြင်မှုဆိုတာပေါ့။
ကျွန်ုပ်တို့ဟာ စာသင်ကျောင်းတွေ ကောလိပ်တွေရဲ့ စာအံခန်းတွေထဲမှာ ဆယ်နှစ် ဆယ့်ငါးနှစ်လောက်ပိတ်မိနေခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးလွတ်လာတော့ ရင်ထဲမှာစကားလုံးတွေအပြည့်နဲ့ဘာဆိုဘာမှလည်းမသိ။
ပညာရေးရဲ့လျှိ့ဝှက်ချက်က တပည့်တွေကိုလေးစားခြင်းမှာတည်တယ်။
လမ်းရဲ့ခေါ်ရာနောက်မလိုက်နှင့်။ လမ်းမရှိတဲ့နေရာသွားကာ လမ်းကြောင်းချန်ထားခဲ့ပါ။
ိDo not go where the path may lead, go instead where there is no path and leaveatrail.
Permalink Reply by layeik on April 20, 2011 at 16:00